Indlu enamachibi okubhukuda endaweni yomndeni
Pont-Scorff, Bretagne, i-France
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Sophie
U-Sophie uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-92% wezivakashi zakamuva.
Epaki elikhulu langasese, uzohlala endlini ezimele enomnyango wangasese kanye nengadi.
Siphakamisa ukuthi uchithe indawo yokuhlala ethule endaweni yomndeni imizuzu engama-20 ukusuka ogwini kanye nokuvakasha okuningi kwamasiko, imisebenzi kanye nokuhamba endaweni ezungezile.
Indlu iyintsha ngokuphelele, ihlanzekile, iyasebenza futhi ifakwe kahle kakhulu.
Ehlobo, ifenisha yasengadini, izoso kanye nedamu lokubhukuda kuyatholakala.
Woza uzochitha isikhathi esimnandi endaweni ezolile yohlaza!
Le ndlu encane enhle yamaBreton ekuqaleni yayiyindlu ye-cider, igaraji kanye ne-attic esisanda kuyilungisa.
Usendaweni yomndeni lapho sichitha khona amaholide ethu.
Ungakhululeka futhi udlale engadini ebekelwe wena.
Senza konke okusemandleni ethu ukuze sihlele indlu ngendlela engcono kakhulu ukuze uthole induduzo yakho. Indlu yintsha, yenziwe kabusha ngokuphelele.
Uzothola konke ukunethezeka okudingekayo kanye nemishini eyisisekelo (ikhishi elihlonyiswe ngokugcwele, igumbi lokuphumula elihlomele, imidlalo yasendlini yabancane nabadala...). Ehlobo sihlinzeka ngefenisha yasengadini, izoso kanye nomjingi; okwezingane.
Lapho i-swimming pool (engashisi) ivuliwe (cishe phakathi kukaJuni - maphakathi no-September), ufinyelela okungenamkhawulo kuyo ngezikhathi ezichazwe nabanikazi. Kodwa-ke, ngoJuni noSepthemba alukho uhlelo lwezikhathi, ungaya lapho noma nini lapho ufuna kanye naphakathi namasonto kaJulayi (ngaphandle kwezimpelasonto).
Impahla ye-pool ayinikeziwe (thawula, ibhande lengalo, ama-buoy noma enye...).
Kuzosayinwa umthethonqubo ekuqaleni kokuhlala ukuze kuhlonishwe imiyalelo yokusetshenziswa kwedamu lokubhukuda nokuthi abazali banesibopho ngezingane zabo.
Uzothola amashidi namathawula esizeni. Amathawula akumele neze asetshenziselwe i-swimming pool.
IPont-Scorff iyidolobha elincane elithule emazweni aseMorbihan. Yaziwa ngegceke layo lezobuciko nemisebenzi yezandla, lezi zihambo eduze ne-Scorff, uzothola imisebenzi eminingana ongayenza endaweni ezungezile.
Amabhishi ahlukene aphakathi kuka-10 no-15 km kanti isiteshi i-Lorient TGV siqhele ngamakhilomitha angu-12.
Zizwe ukhululekile ukubuza lapha: (URL HIDDEN)
IPont-Scorff itholakala imizuzu engama-20 ukusuka eLorient futhi futhi cishe imizuzu engamashumi amabili ukusuka emabhishi okuqala.
Adepte d'airbnb quand je pars en vacances ou en we, j'ai choisi, moi aussi, de faire profiter ma maison à ceux qui recherchent un lieu en Bretagne, au calme, en pleine nature
Ngokujwayelekile kufanele kuhlale kukhona umuntu endaweni.